Iingxaki zethebhulethi zisonjululwe: Ibuprofen & sticking - I Holland
Igama lemveliso kunye nomthamo: Ibuprofen - 400mg
Uhlobo lwesixhobo: I-Eurostandard B
Uhlobo lweendaba: Isikhululo seFette 2090i - 45
ingxaki: Umthengi wayesoloko esokola ukucinezela olu qulunqo ngenxa yemicimbi yokuncamathela kunye nokomelela kwemveliso iyonke. Oku kuthetha ukuba kufuneka kuqhutywe ushicilelo ngesantya esisezantsi ukonyusa ixesha lokuhlala kunye nokwenza ithebhulethi ngokweenkcukacha. Nangona kunjalo, oku kuthetha ukunciphisa imveliso yethebhulethi kunye nokuchaphazela ukusebenza kakuhle kwemveliso.
isisombululo: I Holland yacebisa kwaye yanikezela ngeeseti zepunch nge-XDF (eXtended Dwell Flat) entloko njengoko oku kunokuba nezibonelelo ngokuchasene nayo yonke imiba umthengi awayejamelana nayo.
Impumelelo: Izantya zoshicilelo ezininzi zavavanywa ngesixhobo esitsha seXDF. Iipilisi zesampuli eziqokelelwe kwintsebenzo nganye ziqinisekisile ukuba ulingo lube yimpumelelo njengoko zonke zidibene nemilinganiselo yokwamkelwa. Impumelelo yokuphumeza izixhobo ze-XDF ithetha ukuba umthengi wandise imveliso nge-50% yemveliso yabo yangaphambili, eyongezelelweyo i-75,000tph.
Ngamawaka angama-90 eepilisi ezongezelelweyo ngeyure, imveliso ye-80% iyanda, i-129 iibhetshi ezongezelelweyo ukusuka kwixesha lokuphila...